बालबालिकाका लागि मोबाइल फोन कति उपयोगी ? – जागरण अनलाइन
२०७६ जेष्ठ २८, मंगलवार १७:१२ मा प्रकाशित
मोबाइल फोनको आविष्कार सन १९७३ मा अमेरिकाका इन्जिनियर डा.मार्टिन कुपरले गरेका हुन् । मोवाइल फोन आविष्कार भएको २६ वर्ष पछि सन् १९९९ मा नेपालमा मोबाइल फोनको शुरुवात भएको हो । हाल मोबाइलमा Skype(2003 ), Facebook ( 2004 ), youtube (2005 ),Twitter (2006), Viber (2013), Whatsapp (2015), Snapchat (2017) लगायतका विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरु उपलब्ध छन् । हामी २१ औँ शताब्दीको Digital युगमा छौँ । यहाँ हरेक कुरा प्रविधिसँग जोडिएको छ । यो ठूलो उपलब्धी हो । के हामी प्रविधिको प्रयोगले वास्तवमै खुसी छाँै त ? मोबाइल बालबालिकाका लागि कति हितकारी वा अहितकारी छ ? यी प्रश्नहरुको उत्तर समयमै खोज्न जरुरी छ ।
आजभोलि मानिसको अति प्रिय वस्तु के होला ? यसको सही उत्तर हुन्छ, मोबाइल बिहान उठेदेखि राती नसुतुन्जेल तपाईको साथमा रहन्छ । मोबाइल जीवनको अभिन्न अंग नै भई सकेको छ । मोबाइल बिनाको जीवनको कल्पनानै गर्न नसकिने भईसकेको छ । मोबाइल जति उपयोगी छ त्यति हानिकार पनि छ । यस लेखको मुख्य उद्देश्य मोबाइलले बालबालिकामा पर्ने असरहरु र त्यसका समाधानका उपायहरु चर्चा गर्नु हो ।
मोबाइलको अधिक प्रयोगले बालबालिकामा कस्तो असर पर्छ ?
शारीरिक असरहरु ः– निरन्तर मोबाइलको स्क्रीनमा दृष्टि पर्नाले बालबालिकामा आँखाको समस्या, टाउको दुख्ने समस्या, अदुरदृष्टी जस्ता समस्या देखा पर्दछन् । एकोहोरो मोबाइल चलाएर एकै स्थानमा बसिरहँदा बुढीऔंला, चोरआंैला, गर्दन, कुहिना, मेरुदण्डमा पीडा उत्पन्न हुन्छ र विस्तारै समस्याले जटिल रुप लिन्छ । घरमै बसिरहँदा बालबालिका मोटोपनको शिकार हुन्छन् । मोटोपना रोगको जड हो । मोबाइलमा टाँसिएको ब्याक्टेरिया बालबालिकाको हात हँुदै मुखमा प्रवेश गर्दा विभिन्न शारीरिक समस्या देखा पर्दछन् । निन्द्रा पूर्ण नहुँदा पाचन प्रक्रिया, रक्त सञ्चार प्रक्रिया इत्यादिमा असर पुग्दछ ।
मानसिक असरहरु ः– अमेरिकामा गरिएको एक अध्ययन अनुसार मोबाइलको कम प्रयोग गर्ने र मोबाइलको अधिक प्रयोग गर्ने बालबालिकाको मस्तिष्कको विकास अध्ययन गर्दा फरक नतिजा प्राप्त भयो । अधिक मोबाइल प्रयोग गर्ने बालबालिकाको मस्तिष्कको विकासमा बाधा सिर्जना भएको र कम प्रयोग गर्ने बालबाललिकाको मस्तिष्कको विकास सामान्य तवरको पाइयो । मोबाइलको प्रयोगका कारण मस्तिष्कको एउटा भाग ‘इन्सुला’ प्रभावित हुँदा बालबालिकामा मानसिक समस्या देखा पर्ने कुरा बाहिर आयो । मोबाइलबाट उत्पन्न हुने Radiation (विकिरण) का कारण बालबालिकामा स्मरण शक्तिमा ह्रास, मस्तिष्कको क्यान्सर जस्ता जटिल समस्या देखा पर्दछन् । बालबालिकामा देखापर्ने मानसिक तनावको एउटा कारण मोबाइलको अधिक प्रयोग गर्नु पनि हो ।
मनोवैज्ञानिक असरहरु ः–आक्रमक गेमहरु खेल्नाले बालबालिका अत्यधिक रिसाउने र जिद्दी स्वभावको बन्दछन् । मोबाइलमा रमाउने स्वभावका कारण बालबालिकाहरु अभ्यासमा, पढाइमा एकाग्रह हुन सक्दैनन् । मोबाइलमा पूर्ण रुपमा भर पर्दा आत्म बलमा कमी आउँछ ।
सामाजिक र व्यवहारिक असरहरुः– अधिक मोबाइल चलाउने बालबालिकाले आफ्नो संसार नै मोबाइलमा सिमित राख्दछन् । उनीहरु बाहिरी संसारबारे अज्ञात हुन्छन् । आफूभन्दा ठूलालाई गर्नु पर्ने आदर सम्मानमा ध्यान नै दिदंैनन् । बालबालिकाहरुमा असहयोगी भावनाको विकास भइरहेको छ । इन्टरनेटमा रहेका प्रतिबन्धित Website हरुमा अश्लील फोटोहरु वा भिडियोहरु अवलोकलन गर्नाले बालबालिकामा मनोवैज्ञानिक असर देखापर्दछ । जसले सामाजिक विकृति ल्याउनमा टेवा दिइरहेको छ ।
मोबाइलको नशा ः– विश्वमा सबैभन्दा बढी मोबाइलको प्रयोग गर्ने देशहरुमा चीन अग्रपङ्क्तिमा आउँछ । मोबाइलको अधिक प्रयोगका कारण बालबालिकाहरुमा मोबाइलको नशा नै लागि सकेको छ । केही बालबालिका मोबाइल बिना एकपल पनि बाँच्न नसक्ने भइसकेका छन् । चीनमा मोबाइललाई ‘इलेक्ट्रोनिक हेरोइन’ अर्थात विद्युतीय नशालु पदार्थको संज्ञा दिइएको छ । बालबालिकाहरुलाई मोबाइलको लतबाट छुटाउनका लागि चीनमा इन्टरनेट डिटकशीफीकेशन सेन्टर अर्थात इन्टरनेटको नशा हटाउन पूर्णस्थापना केन्द्र समेत खोलिएको छ । जहाँ बालबालिका र उनीहरुका अभिभावकलाई पनि साथसाथै राखेर उपचार गराइरहेको छ । यस्तो परिस्थितिको सामना भोलि हामीहरुले पनि भोग्नु पर्ने हुन सक्छ । समयमै हामी अभिभावक सचेत हुन जरुरी छ ।
बालबालिकालाई मोबाइलको लतबाट छुटाउन वा न्यूनिकरण गर्न के गर्ने
विभिन्न बहानामा बालबालिकालाई मोबाइल नदिनुहोस ः–
आजभोलि मोबाइलफोन बालबालिकाहरुलाई व्यस्त राख्ने साधन भएको छ । बालबालिकाहरुलाई खाना खुवाउनका लागि मोबाइलको सहारा लिइन्छ । अन्य व्यक्तिसँग कुरा गर्दा घरमा कुनै कार्य गर्दा, ड्राइभिङ गर्दा, पसलमा कपडा खरिद गर्दा बालबालिकाहरुले डिस्टब नगरुन त्यसका लागि उनीहरुको हातमा मोबाइल दिन्छौं । आफ्नो सहजताको लागि बालबालिकालाई क,ख………. सिकाउन राइमस सिकाउन Android फोनको सहारा लिन्छौं । शब्दार्थ खोज्न,केही प्रश्नको उत्तर खोज्न बालबालिकालाई मोबाइल दिन्छौं । देख्दा यस्ता साना लाग्ने क्रियाकलापका कारण बालबालिकाहरु बिस्तारै मोबाइल तर्फ आकर्षित हुन्छन् । यसको विकल्प खोज्न आवश्यक छ ।
बालबालिकालाई विभिन्न बहानामा हामी आफै मोबाइल दिन्छौं, पछि मोबाइल चलाउन निषेध गर्छौ । यो त खानाका मिठा परिकार पकाएर खान नदिए जस्तो भएन र ? आफैलाई एकपटक प्र्रश्न गर्नुहोस् कतै तपाई त गलत हुनु हुन्न ? आफ्नो व्यवहार सच्चाउन जरुरी त छैन ? विचार पु¥याउनुहोस् ।
अन्य व्यक्तिका अगाडि बालबालिकाको प्रशंसा नगर्नुहोस् !
यहाँ बालबालिकाले गरेका क्रियाकलापको प्रंशसा नगर्नुहोस् भन्न खोजेको चाहि होइन । कहिले काँही के हुन्छ भने तपाईको घरमा आफन्तहरु आएको समयमा बालबालिकाको अगाडि मेरो बाबु÷नानीले गेम डाउनलोड गर्न सक्छ, मैले नजानेको फिचर पनि चलाउन सक्छ, मोबाइल सम्बन्धी प्राय कुरा उसलाई आउँछ, जस्ता वाक्यहरु गर्वका साथ व्यक्त गर्दा बालबालिकाहरुले आफ्नो प्रंशसा गरिरहेको महसुुुुस गर्छन्, फलस्वरुप अझ मोबाइल चलाउन उत्प्रेरित हुन्छन् ।
उदाहरणीय पात्र बन्नुहोस् ः
बालबालिकाहरुको पहिलो शिक्षक तपाईहरु स्वयम् हुनुहुन्छ । तपाईहरुले गरेको क्रियाकलापप्रति बालबालिकाहरु विशेष चासो दिनुका साथै नक्कल पनि गरिरहेका हुन्छन् । तपाईहरुलाई धेरै समय मोबाइलमा व्यस्त देखाउँदा उनीहरु पनि मोबाइल प्रति आकर्षित हुन्छन् । उनीहरुको नजिक रहँदा मोबाइलको कम प्रयोग गर्नुहोस् । तपाई आफै सोच्नुहोस् कि? तपाई आफैलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्नु हुँदैन भने बालबालिकाले आफूलाई कसरी नियन्त्रणमा राख्लान् । उनीहरुका लागि उदाहरणीय पात्र बन्नुहोस् ।
बालबालिकाहरुलाई समय दिनुहोस् ः
बालबालिकाहरु मोबाइलको लतमा लाग्नुको अर्को महत्वपूर्ण कारण उनीहरुको एक्लोपना हो । जब बालबालिका आफूलाई एक्लो महसुस गर्छन् । समय व्यतीत गर्नका लागि मोबाइलको सहारा लिन्छन् । उनीहरुको मनोविज्ञान बुझ्नुहोस् । बालबालिकाहरुलाई समय दिनुहोस् । जसरी तपाई अफिसका लागि १० देखि ४ को समय छुट्याउनु भएको छ, त्यसरी नै आफ्ना सन्ततिका लागि दिनको केही समय दिनुहोस् । उनीहरुसँगै व्याडमिन्टन, चेस, फुटबल खेल्नुहोस् । बिदाको समयमा घुमाउन लैजानुहोस्, पारिवारिक पिकनिकमा जानुहोस्, पारिवारिक जमघट गर्नुहोस् । यसले जीवनमा खुसीको अनुभूति ल्याउनेछ । परिवारका सदस्य बीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुनेछ । कृपया आलश्यता नगर्नुहोस् । प्रतिफल तपाई सामु हुनेछ ।
बालबालिकालाई व्यस्त राख्नुहोस् ः–
आजभोलि बालबालिकाहरु घरबाहिर कम खेल्छन् । घरमा मोबाइल चलाएर बस्न मन पराउँछन् । उनीहरुलाई बाहिरी खेलप्रति उत्प्रेरित गर्नुहोस् । कुनै स्पोर्ट कक्षाहरु जस्तै ः फुटबल, क्रिकेट, कराँतेमा भर्ना गर्न सक्नुहुन्छ । यदि तपाईको बालबालिका गितार बजाउन, गीत गाउन मन पराउँछन् भने त्यस्ता कक्षाहरुमा भर्ना गर्न सक्नुहुन्छ । जसले तपाईको बालबालिकालाई सक्रिय र स्वस्थ राख्न मदत गर्दछ । उनीहरुमा पढ्ने बानीको विकास गर्न चर्चित व्यक्तिका जीवन, उत्प्रेरणा प्रदान गर्न सहयोग गर्ने पुस्तकहरु दिनुहोस् । उनीहरुमा संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउँछ । ज्ञानको विकास हुन्छ । फुर्सदको समयमा बालबालिकालाई घरायसी काममा व्यस्त राख्नुहोस् । तरकारी काट्न, खाना बनाउन,कोठा सफा गर्न इत्यादि कार्यमा सरिक गराउनुहोस् । बालबालिकालाई यस्ता कार्यमा व्यस्त राख्दा मोबाइलप्रति कम आकर्षित हुन्छन् तथा मोबाइल चलाउने समय पनि कम पाउँछन् ।
Technology को उपयोग गर्नुहोस् ः–
यदि तपाईका बालबालिका ५ वर्ष भन्दा कम उमेरका छन् भने यो विधि प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ । इन्टरनेटमा उपलब्ध Kids zone Parental control, screen time parental control एप्सहरु डाउनलोड गरी त्यसमा हुँदै आफ्नो प्रोफाइल तयार गर्न सक्नुहुन्छ । आफूले नियन्त्रणमा राख्न चाहेको एप्स जस्तै Game, Facebook, Youtube, Mx player उक्त प्रोफाइलमा राख्न सक्नु हुन्छ । यदि बालबालिकाहरु ५ वर्ष भन्दा माथिका छन् भने Your Hour एप्स डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ । उक्त एप्सले तपाईको मोबाइलमा प्रतिदिन कति समय कुन एप्स चलाउनुभयो भन्ने जानकारी दिन्छ । यो एप्स तपाईका लागि पनि उपयोगी हुनसक्छ । यसबाट विस्तारै कम प्रयोग गर्ने बानीको विकास गर्न मदत पुग्दछ । यसबाहेक इन्टरनेटको पासवार्ड गोप्य राख्न सक्नुहुन्छ । मोबाइलको यि Locking pattern जटिल राख्न सक्नुहुन्छ । बालबालिकालाई विशेष निगरानी गर्नका लागि घरमा CCTV क्यामेरा जडान गर्न सक्नुहुन्छ ।
समय निर्धारण गर्नुहोस् ः–
बालबालिकाहरु अधिक समय मोबाइलमा व्यस्त रहँदा उनीहरुको अध्ययन गर्ने कार्यमा कमी आएको छ । अधिक मोबाइलमा व्यस्त रहने बालबालिकालाई मोबाइल चलाउने समय निर्धारण गरिदिनुहोस् । दिनको आधा वा एक घण्टा बिहान वा साँझ कुन समय उपयुक्त हुन्छ छुट्याउनुहोस् । बालबालिकालाई विकल्प दिनुहोस् यो आधा घण्टा मोबाइलमा वा टि.भी. के हेर्छौं ? समय समाप्ति पश्चात बालबालिकालाई सम्झाई बुझाई उसलाई आफँै मोबाइल वा टि.भी.को रिमोट बन्द गर्न लगाउनुहोस् । यो नियम कडाईका साथ पालना गराउनुहोस् । विशेष ध्यान दिनुहोस्ः– अथक प्रयास गर्दा पनि आफ्नो र आफ्ना बालबालिकाहरुको मोबाइल लत छुटाउन सक्नु हँुदैन भने एउटा समाधान छ Hi Hello मात्र गर्न मिल्ने सामान्य फोन प्रयोग गर्नुहोस् । जीवनको आनन्द लिनुहोस् ।
बालबालिकालाई सचेत गराउनुहोस् ः–
तपाईले आफ्ना बालबालिकालाई मोबाइलका असरहरुबारे भनिरहँदा सुनेको नसुनेनै गर्दछन् तर उनीहरुलाई मोबाइलका कारण मानिसमा पर्ने शारीरिक र मानसिक असरहरु सम्बन्धी लेख रचना देखाउँदा चासो व्यक्त गर्दछन् । अझ प्रभावकारी त के हुन्छ भने तपाईका बालबालिकाले अध्ययन गर्ने विद्यालयका प्रिन्सिपल वा अस्पतालका डाक्टरले भनेको कुराप्रति विशेष ध्यान दिन्छन् र भनेको मान्छन् पनि ।
मोबाइल अतिउपयोगी तर घातक साधन हो । राम्रो कार्यका लागि प्रयोग गरे सकारात्मक प्रतिफल दिन्छ तर नराम्रो कार्यका लागि प्रयोग गरे खतरनाक दुष्परिणाम निम्त्याउँछ । के थाहाँ अन्य दिवस जस्तैः–Mobile Free DAY अर्थात ‘मोबाइल मुक्त दिवस’ मनाउनु पर्ने दिन नआउँला भन्न सकिन्न ।
समग्रमा भन्नुपर्दा ‘समस्या मोबाइल फोनमा छैन, समस्या हामी भित्रै छ’। समस्या समाधानको दीर्घकालीन उपाय हो, ‘Consciousness ’ अर्थात ‘चेतना’ । व्यक्तिमा चेतना जाग्रित भएमा समस्याहरु आफै समाधान भएर जान्छन् । सिद्धान्तमा भन्दा व्यवहारिकतालाई जोड दिऔं । सकारात्मक सोच राखौं, सकारात्मक कदम चालौ, सकारात्मक नतिजा प्राप्त गर्न सक्षम हुने छौँ । बालबालिकाहरु हाम्रा अमूल्य सम्पत्ति हुन । आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा गरांैं । खुसी हौं । सन्तुष्ट हौं ।
लेखक दीपशिखा मा.वि.घोराही दाङ
र शान्ति सुधा मा.वि. घोराही दाङका भौतिक विज्ञानका शिक्षक हुनुहुन्छ ।
प्रहरी कर्मचारीले कर्मचारी प्रशासनमा इन्स्पेक्टर गोविन्द पन्थीको अभाबको महशुस गर्न नपरोस २०७६ जेष्ठ २८, मंगलवार १७:१२
कमलको तारिफ गर्दा किचड रिसाउला २०७६ जेष्ठ २८, मंगलवार १७:१२
विप्रेषण गरिवि निवारणका लागी २०७६ जेष्ठ २८, मंगलवार १७:१२